चालू आवको पहिलो त्रैमासिक : तरकारी/फलफूल आयातमै रू. १४ अर्ब
काठमाडौं । तरकारी र फलफूलमा नेपालको परनिर्भरता बढ्दै गएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो तीन महीनामा १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको तरकारी र फलफूल आयातले यस्तो देखाएको हो । भन्सार विभागको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो त्रैमासिकको तथ्यांकअनुसार गत आवको सोही अवधिको भन्दा यो करीब २० प्रतिशत बढी हो ।
समीक्षा अवधिमा १ अर्ब ९२ करोडको आलु, १ अर्ब ७२ करोडको प्याज, ९० करोडको अदुवा र १२ करोडको गोलभेँडा आयात भएको छ भने १ अर्ब ८८ करोडको स्याउ, ६९ करोडको अंगुर, ३१ करोडको आपँजन्य वस्तु, २९ करोडको केरा, २६ करोडको नरिवल र १६ करोडको कागती आयात भएको छ ।
नेपालबाट हुने तरकारी र फलफूलको निर्यात भने चालू आवको पहिलो त्रैमासिकमा घटेको छ । यस अवधिमा नेपालले रू. ४९ करोडको मात्र तरकारी र फलपूmल निर्यात गरेको छ । गत आव २०७५/७६ मा नेपालबाट रू. ५० करोड मूल्य बराबरको तरकारी र फलफूल निर्यात भएको थियो । तथ्यांकले नेपालमा कृषिजन्य वस्तुको आयात असामान्य रूपमा बढ्दै गएको तर निर्यातको स्थितिमा भने सुधार नभएको देखाउँछ ।
नेपालले खासगरी चीन, भारत र बंगलादेशबाट तरकारी र फलफूलजन्य वस्तुको आयात गर्दै आएको छ । यसबाहेक थाइल्यान्ड, नामिबिया, नेदरल्यान्ड, इन्डोनेशिया, दक्षिण कोरियालगायत देशबाट पनि आयात हुँदै आएको भन्सार विभागले जानकारी दिएको छ ।
सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर कृषकलाई अनुदान दिने व्यवस्था गरे पनि त्यसको प्रभाव नदेखिएको विज्ञहरू बताउँछन् । साथै विषादी परीक्षण योजना पनि बढ्दो आयात रोक्न प्रभावकारी देखिएको छैन । नेपालको बढ्दो तरकारी आयातलाई क्वारेन्टाइन परीक्षणले पनि रोक्न नसकेको पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले बताए ।
नेपालमा खेतीका लागि युवाहरू आकर्षित भइरहँदा पनि आयात बढ्दै जानुले नेपालमा तरकारी र फलफूलप्रतिको परनिर्भरता बढ्दै गएको स्पष्ट हुने साउथ एशिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एन्ड इन्भायरोमेन्टका (सावती) का अध्यक्ष डा. पोषराज पाण्डे बताउँछन् । उनले नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने तरकारी र फलफूलको उत्पादन बढाउँदै आयात घटाउने योजना सरकारले अघि सार्नुपर्नेमा जोड दिए ।
आर्थिक सर्वेक्षणले आव २०७५/७६ मा नेपालमा कुल ५३ लाख २८ हजार मेट्रिक टन तरकारी तथा फलफूल उत्पादन हुने देखाएको थियो । सर्वेक्षणमा आव २०७४/७५ को तुलनामा तरकारीको उत्पादन १ दशमलव ८६ प्रतिशतले र फलफूलको उत्पादन १४ दशमलव १६ प्रतिशतले बढ्ने उल्लेख थियो । आव २०७५/७६ मा तरकारी र फलफूल लगाइने क्षेत्रफल अघिल्लो आव २०७४/७५ को भन्दा १ दशमलव ७५ प्रतिशतले बढेर कुल २ लाख ९७ हजार १९१ हेक्टर पुगेको थियो ।
दुग्ध उद्योगलाई बचाउन राहत प्याकेजको माग[२०७७ जेठ, १३]